Devuan 3.0 Beowulf သည် Debian 10.4 base, Kernel 4.19 နှင့်အခြားအရာများနှင့်အတူရောက်ရှိခဲ့သည် Linux မှ
Devuan 3.0 Beowulf သည် Debian 10.4 base, Kernel 4.19 နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိသည်
ပစ်လွှတ် Linux ဖြန့်ဖြူးမှု၏ဗားရှင်းအသစ် « Devuan 3.0 Beowulf » ဘာလဲ Debian ၏လမ်းဆုံလမ်းခွ, သို့သော် systemd မရှိခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။
ဌာနခွဲသစ်သည် Debian 10 "Buster" အထုပ်၏အခြေခံသို့ကူးပြောင်းခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည်။ စီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၎င်း၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400 Debian packages များဗားရှင်းကိုဖန်တီးပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည် Devuan ၏အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်း၊
Packuan နှစ်ခု (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) Devuan တွင်သာရှိပြီး repositories ၏ configuration နှင့် build system ၏လည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မဟုတ်ပါက Devuan သည် Debian နှင့်အပြည့်အဝရှိပြီး systemd မပါဘဲအထူး Debian တည်ဆောက်မှုများအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပုံမှန် desktop သည် Xfce နှင့် Slim display manager ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ KDE, MATE, Cinnamon နှင့် LXQt တို့ကိုလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အဲဒီအစား systemd အစား, ဂန္ SysVinit initialization system ကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ optional တစ်ခုအနေဖြင့် D-Bus မပါသောလုပ်ဆောင်မှု mode သည်အနက်ရောင်သေတ္တာ၊ fluxbox, FVWM, FVWM-crystal နှင့် Openbox မန်နေဂျာများပေါ်တွင်အခြေခံထားသည့်အနည်းဆုံး desktop ဖွဲ့စည်းမှုများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
Network ကို configure လုပ်ရန်၊ systemd နှင့်မသက်ဆိုင်သော NetworkManager configurator ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ KDE မှအသုံးပြုသူများ၏ session များကိုစီမံရန် Cinnamon နှင့် LXQt တို့က systemd နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော elogind, option logind ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Xfce နှင့် MATEconsolekit အသုံးပြုခြင်း။
1 Devuan 3.0 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
2 Devuan 3.0.0 Beowulf ကို download လုပ်ပါ
3 Devuan 3.0.x မှ Devuan2Beowulf သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
Devuan 3.0 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
အစပိုင်း၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြန့်ဖြူးမှု၏ဤဗားရှင်းအသစ်တွင်အဓိကအသစ်အဆန်းမှာ Debian 10 ၏ "Buster" package base သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း နှင့် Package များကို (Debian version 10.4 နှင့်ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်သည်) Linux kernel version 4.19 ကိုထောက်ပံ့ထားသည်။
Devuan 3.0 မှာထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့ eudev နှင့် elogind ၏သီးခြားနောက်ခံဖြစ်စဉ်များ / dev လမ်းညွှန်ရှိစက်ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုဖြုတ်ခြင်းနှင့်ပြင်ပကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့် monolithic system components များကိုအစားထိုးရန်။
ဒါ့အပြင်ဒီဗားရှင်းအသစ်ထဲမှာ ppc64el ဗိသုကာအတွက်ထောက်ခံမှုယခုရရှိနိုင်ပါပြီယခင်ထောက်ပံ့ထားသော i386, amd64, armel, armhf နှင့် arm64 platform များအပြင်
ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အသစ်မန်နေဂျာနှင့်ပေါင်း layout ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် နှင့်အသစ်တစ်ခုကို desktop ဆောင်ပုဒ်အဆိုပြုထားသည်။ Runbit system manager ကို sbin / init အနေဖြင့် ရွေးချယ်၍ OpenRC initialization system ကို sysv-rc service နှင့် run-level controls အတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Finalmente သင်ကအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်သင်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် အောက်ပါ link ကိုမှာ။
Devuan 3.0.0 Beowulf ကို download လုပ်ပါ
သင်ဤ Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကို download လုပ်လိုပါက သင်က၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားရပေမည် နှင့်၎င်း၏ download, အပိုင်း၌တည်၏ system ပုံရိပ်ကိုသင်ရနိုင်သည် ယင်း၏ရရှိနိုင်ကြေးမုံတ ဦး တည်းအနေဖြင့်။ သင်နှင့်အနီးဆုံးဆုံးကိုသုံးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဒီ link က
Devuan 3.0.x မှ Devuan2Beowulf သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
Si အကယ်၍ သင့်တွင် Devuan ဗားရှင်း 2.x ထည့်သွင်းထားပါက system ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းစရာမလိုပဲတည်ငြိမ်သော version အသစ်သို့အသစ်ပြောင်းနိုင်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ Terminal ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါ command များကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ ပထမဆုံး Devuan 3.0 ကို repositories ကို source.list ထဲထည့်လိုက်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောတည်းဖြတ်သူနှင့်တည်းဖြတ်ပြီးထို repositories ကိုထည့်ပါ (အခြားမည်သည့် repository ကိုမဆိုအစတွင် # နှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းတွင်ပြinနာများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းကိုဖျက်ရန်)
terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် update ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ပြီးရင်အောက်ပါ command တွေကိုရိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် system ကို update လုပ်ပါ။
ဒီနေရာတွင် update အတွက်လိုအပ်သော package နှင့် configurations အားလုံးကိုစတင်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်နှေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် terminal တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာ system ကိုမွမ်းမံထားသောအခြားအလုပ်အချို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးမှာပြောင်းလဲမှုအားလုံးအကျိုးသက်ရောက်ဖို့သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ရပါမယ် ထပ်မံ၍ စတင်သောအခါ Devuan ဗားရှင်းအသစ်ကိုသင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရမည်။
အထုပ်ပျက်ကွက်မှုမှာ ပျက်ကွက်တဲ့ package တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးရင် update ကိုပြန်စတင်ပါ။
ASCII မှပြောင်းပြီး upower ကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများသည်ပြupနာများကိုရှောင်ရှားရန်သူတို့၏ upower package များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Devuan 3.0 Beowulf သည် Debian 10.4 base, Kernel 4.19 နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ရောက်ရှိသည်
Javier Ortega Conde (မလကာဗီးယား) ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Desktop PC အတွက် Devuan စမ်းသပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောထုတ်လွှတ်မှု၊
Javier Ortega Conde (Malkavian) အားစာပြန်ခြင်း
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးသို့: Brain application ကိုနက်ရှိုင်းစွာအသုံးပြုနည်း။
Linux Mint သည်လျှို့ဝှက်လျှပ်တစ်ပြက်တပ်ဆင်မှုကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်